Antony kibo mivonto amin'ny alika | Alika Manerantany
Maro amin'ireo aretina no zaraina amin'ny olombelona sy ny alika ary noho izany antony izany dia misy tsy manadino kely noho ny hafa, ary izany dia satria ny iray amin'ireo aretina mety mifandraika indrindra dia ny vavony.
Amin'ny fotoana sasany sy amin'ny toe-javatra sasany, ny alikantsika dia mety manana kibo mivonto sy mafy ary izany dia mety vokatry ny zavatra tsy voafaritra, izany no hiresahantsika kely momba ny inona no hatao momba izany amin'ireo karazana toe-javatra ireo sy ny fomba hiadiana amin'izany.
1 Antony kibo mivonto amin'ny alika
1.1 Sakana ny tsinay
1.1.1 Manana alika ny alikako
1.2 Torsion / fivelarana gastric na volvulus gastric
1.2.1 Inona avy ireo soritr'aretin'ny torsion / fanitarana?
1.2.2 Inona no fitsaboana ny torsion / fanitarana?
1.2.3 Ahoana no ahafahako misoroka ny fihodinana / fanitarana?
1.3 Ascites canine
1.4 Peritonitis amin'ny kanine
2 Betsaka ny zavatra manontany tena ny olona:
2.1 Alika olon-dehibe manana kibony mafy sy mivonto
2.2 Mivonto sy mafy ny kibon'alika
2.3 Mivonto sy midina ny alikako
2.4 Narary kibo ny alikako ary mimenomenona
2.5 Ny alikako dia kibo mivonto sy malefaka
3 Torohevitra hisorohana ny alika tsy hibo-kibo
3.1 Sakafo kalitao
3.2 Alefaso ny sakafo sy ny rano
3.3 Tsy mila manao fanatanjahan-tena aorian'ny fisakafoanana (na taloha)
3.4 Mitandrema amin'ny adin-tsaina
Entona: Toy ny olombelona, ​​ny alika dia mety hijaly koa amin'ny etona ka mahatonga ny vavony ho vay sy mafy, ka misy antony maro mahatonga izany:
Fiovana tampoka amin'ny sakafo, karazana sakafo, sakafo voaomana sns.
Sakafo ratsy kalitao.
Mihinana haingana na tsy mitsako.
Na dia tsy mitovy aza ny toe-javatra tokony hodinihina rehefa misy ambony mivonto sy mafy ny alika misy raha alika kely na olon-dehibe ilay biby, dia avelany hahafantatra ny natioran'ilay olana izy ireo ary hanao tombana kely ahafahantsika mamarana amin'ny zavatra iray.
Raha mandeha any amin'ny raharaha puppy misy kibo mivonto sy mafy isika, dia azo inoana fa noho ny olana amin'ny katsentsitra izany.Voavaha izany amin'ny fitsaboana kely (notendren'ny mpitsabo matihanina taloha) ary aorian'izany ny vaksininy avy, zavatra vita amin'ny valo herinandro mahery.
Ny alikakely misy kibony mafy sy mivonto dia mahazatra kokoa ary azo tsaboina kokoa noho ny olon-dehibe, satria ny ankamaroan'ny olana dia mety ateraky ny rononon-dreny, izay efa manana katsentsitra maro, izany dia manazava ny maha-zava-dehibe ny deworming raha vao nahavita ny dimy ambin'ny folo andro niainany. fiainana.
Ny pitsopitsony amin'ny vaksininy dia ny fanoherana ireo karazan-katsentsitra rehetra ary izany no antony mety hisian'ny fisian'izany foana, ary azo esorina amin'ny fitsaboana fatra maro isan-kerinandro.
Olana iray miseho amin'ny fivontosan'ny faritra amin'ny kibony, fa ho malemy izy io. Antsoina hoe fanakanana ny tsinay, dingana fanakanana ny lalan'ny atin'ny tsinay amin'ny alàlan'ny lalan-dra ary izany, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia noho ny fisian'ny zavatra vahiny sasany ao.
Efa nilaza izahay teo aloha fa misy ambaratonga roa manakantsakana: ampahany sy total. Na izany aza, rehefa mitranga io sakana io amin'ny fizarana voalohany amin'ny tsinay kely, ny famantarana matetika dia ny mandoa amin'ny endrika projectile.
Etsy ankilany, raha ny sakana dia mitranga ao amin'ny tapany farany amin'ny tsinay kely, ankoatry ny fihenan'ny kibony, handoa ranon-javatra misy alika fecal sy loko volontany ny alika.
Ny sakana tanteraka dia matotra tokoa, satria ny alika dia tsy afaka mamoaka entona na maloto, na dia ny fitrandrahana ny tsinay aza dia azo atao tsara.
Izy io koa dia misy antony marobe, ny tena mahazatra dia:
Vatana vahiny ao amin'ny lalan-tsinay.
Fanaparitahana ny ampahan'ny tsinay mankany amin'ny faritra hafa
Manana alika ny alikako
Ny rivotra dia matetika vokatry ny fihinanana rivotra, ary izany amin'ny alika dia mitranga rehefa misakafo haingana sy imbetsaka izy ireo nefa tsy mitsako sakafo, mameno ny vavony amin'ny vavony.
Antony iray hafa mahatonga ny biby fiompinao mety hijaly amin'ny gazy dia ny tsy fandeferany amin'ny sakafo, izay ahitsy amin'ny sakafo sahaza notoloran'ny manam-pahaizana manokana.
Ny olana dia mety misy ifandraisany mivantana amin'ny aretina noresahintsika tetsy ambony. Na izany na tsy izany, rehefa maharitra ny soritr'aretina dia mety ny mandeha amin'ny consultation veterinary ho fanombanana sy fitsaboana.
Torsion / fivelarana gastric na volvulus gastric
Toe-javatra iray hafa izay mila fiheverana maika avy amin'ny mpitsabo nify, satria matetika no mahafaty ny vokany. Tsy midika fihenan'ny torsion mitovy amin'ny fanitarana izy io, satria rehefa misy ny fanitarana, ny tsinay dia manalavitra ny vokatry ny entona na ny ranoka.
Torsion na volvulus kosa, Izy io dia mipoitra rehefa ny kibo ao anaty toetran'ny distention, mihodina lava ary miaraka aminy koa ny spleen.
Raha mihodina 180m ny vavony dia miatrika torsion isika, fa raha mihodina mihoatra ny 180º dia io no antsoina hoe volvulus ary io dia rehefa mety hihamafy ny toe-javatra ho an'ny alika, satria rehefa mihetsika ny pylore dia manery ny duodenum ary tsy mamela ny rivotra sy ny tsiranoka hivoaka amin'ny vavony.
Voabahana ihany koa ny faritra gastroesophageal, noho izany dia tsy afaka mandoa na mihinana ny alika, ireo atiny rehetra voafandrika ao anaty vavony dia manomboka ny fizotra, miteraka gazy ary ny fihenan'ny kibony vokatr'izany.
Ny vokatra azo avy amin'ny fanitarana torsion dia Septicemia bakteria, tsy fahampian-drano, perforation gastric, arrhythmia, peritonitis, ary fahafatesan'ny alika. Ity toe-javatra ity dia mety hitranga amin'ny karazana alika, na inona na inona taonany, na dia alika lehibe aza dia somary mijaly amin'izy ireo.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny torsion / fanitarana?
Amin'ireo tranga ireo ny biby fiompy Tena tsy hialana sasatra ianao, miaraka amina salivation malaza, mikorontana, miaraka amin'ny fisaleboleboana ary manandrana mandoa nefa tsy mahomby, dia hahatsiaro ho nivonto ny kibo ary mikasika anao dia mety hahatsapa fanaintainana be ianao; noho ireo izay vao avy nanondro ireo soritr'aretina matetika indrindra isika.
Na izany aza, ny fihenan-tsasatra / fanitarana dia mety hiseho amin'ny fomba hafa, toy ny kibo mihetsiketsika be rehefa voakitika, malemy ary soritr'aretina tsy mahazo aina nefa tsy dia milamina.
Rehefa mandroso be ny fizotrany, dia ho lasa hatsatra ny lela sy ny siligaoma, ho malemy be ny fitepon'ny fony, miaina haingana, ary koa ny tahan'ny fo, ny fahalemeny ary farany ny fianjeran'ny biby noho ny hatairana.
Inona no fitsaboana ny torsion / fanitarana?
Mba hitsaboana tranga misy fanitarana tsotra, dia ho ampy ho an'ny mpitsabo biby ny mampiditra fantsona ao an-kibon'ilay alika, ary manaparitaka ihany koa na misy toriteny na tsia. Raha vao mahatratra ny vavony ny fantsona, ny fihetsiny eo noho eo dia ny fivoahan'ny tsiranoka sy ny rivotra haingana, izay mitondra fanampiana avy hatrany amin'ny kaninina.
avy hatrany asiana lavage vavony ary atoro ny fifadian-kanina mandritra ny 36 ora, hanampiana anao ho sitrana. Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny volvulus dia amin'ny alàlan'ny fakana taratra X, satria tsy afaka mamantatra izany foana ilay fanadihadiana.
Raha tohina ny alika dia mila fitsaboana vonjy maika sy amin'ny ankamaroan'ny tranga fandidiana izy io, mba hamindrana ny vavony sy hombo any amin'ny toerana misy azy ireo na hanesorana ireo faritra niaritra nekrosis, raha ilaina izany.
Ahoana no ahafahako misoroka ny fihodinana / fanitarana?
Aza avela hisotro rano be dia be ny alika indray mandeha.
Zaraina telo kely sy mitovy ny sakafonao isan'andro.
Aza avela hisotro rano adiny iray mialoha izy ary avy hatrany aorian'ny sakafo.
Aza miala amin'ny filokana na fanaovana fanatanjahan-tena be loatra rehefa feno vavony.
Ento any amin'ny mpitsabo biby izy raha vao mahatsikaritra ireo soritr'aretina.
Manaova zavatra haingana sao miverina ny olana.
Ny teny hoe ascites dia aretina mifandraika amin'ny kibo mivonto amin'ny alika. Izany no ahafantarana ny fiangonan'ny tsiranoka ao amin'ny kibony. Ity tsiranoka ity dia avy ao anaty sela, ary koa avy amin'ny lalan-drà sy lalan-drà, saingy, noho ny antony sasany dia "nivoaka" izy io ary nanomboka tonga tany amin'ny faritra tokony tsy tokony halehany ny ranoka ka nahatonga ny zavamiaina manontolo lasa tsy nandanjalanja.
Ny antony mety hitrangan'ny ascites dia samy hafa, fa ny tena fahita dia mifandraika amin'ny fivontosan'ny digestive, mandeha rà, homamiadana, tsy fahombiazan'ny fo na koa vaky ny harona tatavia.
Ny famantarana voalohany ho hitanao amin'ny alikanao dia a fisondrotana lanja tsy mitombina, ankoatr'izay dia ho nivonto sy mahasosotra kokoa ny mikasika azy io. Ho fanampin'izany, ho sarotra aminao ny miaina, tsy hahatsapa ny hisakafo na hisotro ianao, ary mety handoa.
Raha ny marina, ny aretina dia mety mitaky fotoana hisehoana (amin'izany fotoana izany dia hiharatsy ny soritr'aretina, imbetsaka ny tompony tsy mahatsapa fa misy olana lehibe), na mety hiseho miaraka amin'ny fivoarana haingana be ao anatin'izany.
Na izany na tsia, zava-dehibe ny manatona dokotera an-trano hizaha izany. Matetika izy io dia miorina amin'ny taratra X, fitsapana amin'ny laboratoara, fitarafana na, amin'ny tranga tsy fahita firy, ny puncture amin'ny kibo mba hahafantarana ny karazan-tsiranoka (ra io na karazana hafa).
Amin'ny ankapobeny, ny fitsaboana dia hiorina amin'ny fanafody (angamba hanafoana ny ranon-javatra), fa miankina amin'ny antony nahatonga azy io, dia azo inoana fa mila fidirana an-tsehatra amin'ny fandidiana hanafoanana ny olana ianao.
Soa ihany aretina manasitrana raha tratra ara-potoana, ary matetika tsy dia matotra loatra (na dia tsy midika akory izany hoe tsy maintsy mihetsika haingana ianao).
Peritonitis amin'ny kanine
Ny peritonitis an'ny kanine dia toe-javatra iray izay ahafahan'ny alika mandalo izany dia miavaka amin'ny fananana kibo maranitra, maharary ny fikasihan-tanana, miaraka amin'ny fivontosana, fahalemena, fahaketrahana, fivalanana ary fandoavana, Etc.
Mipoitra tampoka ity fivontosana mahery vaika ity, ary miseho matetika ao amin'ny vatan'ny kibony. Ny zava-mitranga dia ny fihazonana ny tsiranoka izay miteraka tsy fifandanjan'ny electrolyte, ary koa ny tsy fahampiana rano. Afaka ora maromaro, dia mety ho lasa ratsy kokoa ilay alika, ho tohina na ho tonga koma mihitsy.
Anisan'ireo soritr'aretina izay ho hitanao amin'ny peritonitis, ny voalohany amin'izy ireo dia ny havizanana, arahin'ny olana miaina, mihozongozona, ary avy eo mitomany sy mimenomenona noho ny fanaintainana mafy izay hijaly ny biby fiompinao. Izany no nanolorana anao hevitra fa andeha manatona vetivety ianao mba hisorohana ny fijaliana.
Ny antony mahatonga ny peritonitis canine dia mifandraika amin'ny viriosy izay misy fiatraikany amin'ny vavony na ny tsina (na izy roa), katsentsitra tsinay, aretin-kibo ao am-bohoka, lavaka ao amin'ny vavony na tsinay na koa ny abscesses amin'ny taova hafa toy ny sarakaty, ny hazondamosina ... Ireo antony hafa mety hitarika an'io aretina io dia ny fivontosana, ny hernias, ny trauma ao amin'ny faritra misy ny kibony, ny vatosoa na voa, fanapoizinana. ..
Raha vantany vao manatona mpitsabo ianao dia afaka mamantatra ny olana izy, tsy amin'ny palpation ihany fa amin'ny fitsapana ra, amin'ny ultrasound sns. Amin'ny tranga maro, noho ny toe-javatra iainan'ilay biby, dia mety ny hampiononana azy ireo mba tsy hijaly izy ireo ary hiasa haingana kokoa ilay matihanina. Raha vantany vao manana ny antony nahatonga ny tsy fahazoana alim-borona ianao, ity tsaboina amin'ny fanafody sy fitsaboana hafa izay manampy amin'ny famerenana ny toe-javatra, ohatra ny fiadiana amin'ny tsy fahampian-drano, ny fanaintainana, na, raha ilaina dia ampidirina an-tsehatra amin'ny fandidiana ilay biby.
Betsaka ny zavatra manontany tena ny olona:
Alika olon-dehibe manana kibony mafy sy mivonto
Ny tranga kibo mafy sy mivonto amin'ny alika olon-dehibe dia somary manahirana kokoa, satria ny antony dia tena hafa noho ny an'ny alika kely ary io no eto ny olana dia mety vokatry ny pathology mifandraika amin'ny vavony, izay misy valiny torolàlana / fanitarana izay mety hanohintohina ny ain'ny alika tsy misy fiheverana haingana.
Ny fidirana an-tsehatra amin'ity tranga ity dia miankina amin'ny fizotrany roa: fanitarana noho ny fisian'ny ranon-javatra sy gazy ao amin'ny tsinay ary ny iray hafa dia fiatraikany amin'ny tsiranoka izay mihodina eo amin'ny kibony ny vavony, toy ny spleen satria nihatakataka izy.
Eto dia mampiahiahy ny raharaha, satria na ny gazy na ny rano tsy mahazaka ny vavony, noho izany ny alika dia tsy afaka mamoaka azy ireo voajanahary (mandroroa na mandoa) ary ity fanangonana gazy sy ranon-javatra ity dia terena ao an-kibo, ary koa mahatonga ny fiasan'ny vatana maromaro manomboka tsy mahomby ary mahatonga ilay biby ho tohina.
Ny antony dia mety ho maro, fa ny tena fahita dia noho ny fihinanana sakafo be dia be avy eo dia atao ny fanaovana hetsika ara-batana mitaky (mandinika ihany koa ny fihinanana ranon-javatra betsaka).
Izany dia hiteraka vokatra toy ny fisaleboleboana amin'ny fanandramana tsy mahomby mandoa, ary koa ny fivontosan'ny kibony. Na izany na tsy izany dia tokony handeha any amin'ny matihanina miasa ianao, satria io olana io dia tsy tokony hatao ambanin-javatra.
Fahano sakafo sy ranoka fatra antonony ny biby fiompinao ary koa fitsaharana sy fotoana fampihetseham-batana voazara tsara izay manomboka tsikelikely amin'ny fangatahana ara-batana, aorian'izany dia afaka mahazo biby fiompy salama sy salama ianao.
Mivonto sy mafy ny kibon'alika
Rehefa manana kibo be dia be sy mivonto ary mafy ny alika kely dia azo inoana fa feno katsentsitra tsinay, izay nifanarahan'izy ireo tamin'ny tranon-jaza, tamin'ny alàlan'ny fampinonoana, na ny fihinana atody tsy nahy.
Mivonto sy midina ny alikako
Ny kibo mivonto dia mety ho vokatry ny zavatra marobe, mety tsy ho zakanao ny fandevonan-kanina, mety ho feno entona ianao rehefa misakafo sy misotro haingana loatra, na angamba noho ianao mijaly noho ny fanitarana ny vavony.
Ity farany koa dia mety ho ny antony mahatonga ny alika mijery ambany, ny zava-dehibe dia ny fandraisanao ny fikarakarana ara-pitsaboana sy fiompiana volo haingana indrindra.
Narary kibo ny alikako ary mimenomenona
Rehefa henjana ny mikasika ny kibo ary tsy zakan'ny alika ny fanerena amin'io faritra io dia mimenomenona noho ny fanaintainana izy tsy maintsy mihetsika avy hatrany isika satria izy ireo dia ampahany amin'ny soritr'aretin'ny torsion-dilation ny vavony.
Ny alikako dia kibo mivonto sy malefaka
Raha mivelatra sy malefaka ny kibo, ny alikanao dia mety manana sakana amin'ny tsinay, na dia mety misy koa aza io famantarana io ao amin'ny torolàlana. Aza hadino fa ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny manatona mpitsabo biby mba hahitana ny aretina marina.
Torohevitra hisorohana ny alika tsy hibo-kibo
Tsy misy olona tia biby te-hijaly alika, saka na biby fiompy. Izany no antony tsy maintsy hitandremanao tsara ny filany takiny. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fisorohana dia misy torolàlana vitsivitsy izay tokony harahinao mba hialana amin'ny faharatsiana lehibe kokoa, tsy ny antony mahatonga ny kibo mivonto ihany, fa ny olana ara-pahasalamana hafa koa.
Araka izany, ireto tolo-kevitra omenay anao ireto:
Tsy hilaza aminao izahay fa tokony hanome azy io marika manokana ny fahana. Na hilaza aminao fa tsy afaka manome sakafo an-trano azy ianao. Na sakafo iray na hafa dia ilaina ny mampiavaka azy amin'ny fananana kalitao.
Ny varotra, ny fihenam-bidy ary ny sakafo mora dia matetika maka fanahy antsika. Tena alika tokoa ny vola alika hikolokoloana: fitsidihana ny mpitsabo biby, fanaovana vaksiny, sakafo ... Saingy manolora sakafo ambany kalitao, na sakafo an-trano izay tsy atolotra ho an'ny biby, ny hany zavatra hiteraka dia ny fijalian'ny fahasalamany. Mety tsy tamin'io fotoana io, fa rehefa mandeha ny taona, indrindra rehefa antitra izy ary manomboka ny aretina.
Rehefa mividy sakafo dia manatona ny mpitsabo biby anao. Izy dia afaka manoro hevitra anao amin'ny fahana rehetra amidinao (raha manana ianao) sy ireo eny an-tsena. Ankoatr'izay, arakaraka ny biby fiompy tsirairay dia mety hahasoa kokoa (na mahasalama) sakafo lena na hanomanana sakafo an-trano arakaraka ny fepetra takiny.
Alefaso ny sakafo sy ny rano
Raha alika tia vola ny alikanao dia azo antoka fa rehefa apetakao ny sakafo dia hohaniny ao anatin'ny minitra vitsy, na manomboka misotro izy ary toa tsy misy farany. Ireo fihetsika ireo izay mety tsy dia mahazatra anao amin'ny ankapobeny dia ratsy dia ratsy amin'ny alika.
Mila alika hihinana am-pitoniana ianao mba tsy hahatonga ny sakafo hahatsiaro ho ratsy, mba tsy ho feno loatra, ary mba tsy hiteraka olana manao ahoana ny miolakolaka ny vavony. Raha ny marina dia nanoro hevitra ny manam-pahaizana fa tsy indray mandeha isan'andro dia mihinana sakafo telo farafaharatsiny. Raha atao teny hafa, zarao intelo ny ampahan'ny sakafo mba tsy ho be tendan-kanina.
Ary toy izany koa no mety hitranga amin'ny rano.
Tsy mila manao fanatanjahan-tena aorian'ny fisakafoanana (na taloha)
Ny fitondrana azy mitsangatsangana sy manao fanatanjahan-tena dia zavatra tokony hataonao isan'andro, fa tsy tokony hatao raha tsy efa vita ny sakafo, na tonga ary manome azy sakafo sy fisotro.
Mila manana fotoana fitsaharana ianao amin'izay ny sakafo dia tsy hahatonga anao hahatsapa ho ratsy, na hanjary olana lehibe.
Mitandrema amin'ny adin-tsaina
Ny alika kivy dia alika velona kely. Ary izany ve rehefa manjaka amin'ny biby ny adin-tsaina, ny fanahiana ary ny hozatra dia mety hiteraka aretina maro izy io, anisan'izany ireo mamontsina ny kibo.
Noho izany dia mila manandrana manana fiainana sahaza sahaza ianao hahatsapanao fa milamina sy faly ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Antony kibo mivonto amin'ny alika
Tsara, nahazo alika kely aho fa nivonto ny kibony ary androany dia nivoaka toy ny kitapo misy ranoka izay hatolotro anao
Mamaly an'i angelas
yismarys chirinos dia hoy izy:
Salama alina manana alika kely 2 volana aho ary manana kibo mivonto sy tsy mahazo aina toy ny tazo izy ary manana 3 andro amin'ny kibony nivonto, ny zavatra tsara tsy nijanona nisakafo isaky ny mihinana lehibe kokoa, mahazo kibo ary mankarary hoy aho, nefa tsy mampihena na inona na inona ataoko izany, mety ho nolazain'izy ireo tamiko fa sakafo ratsy io. Yismarys aho manahy ny alikako misaotra anao
Valio ny chismis Yismarys